China plastic PET intambo ifektri ibhulashi ifektri abakhiqizi | Xinjia
Isici: ukunwebeka okuhleSebenzisa: Ubude BroomFiber: 1100mmUkugcina: 0.20-1.80mmIndawo Yomsuka: Jiangsu, China
Igama lomkhiqizo: XINJIA
Amandla Wokunikezela: 200000 Kilogram / Kilograms per Month
Imininingwane Yokufaka: PE tube, 25kg kwelinye ibhokisi elinsundu
IPort: IShanghai noma iNanjing
Ububanzi Usayizi 0.18-1.80mm
Umbala Ngokwesicelo samakhasimende
Isigaba esiphambanayo Round, unxantathu, eziyize, njll
Ubude obusikiwe 25mm ukuze 1220mm
Inqwaba Ububanzi 50mm noma 80mm
Ukupakisha Ishubhu le-PE
Ibhokisi 25kg noma 30kg, ibhokisi elinsundu
Isikhathi esiholayo Izinsuku zokusebenza eziyi-15
Ukukhokha 30% idiphozi nebhalansi ngokuqhathaniswa nekhophi ye-B / L.
Ngenxa yokululama okuphezulu kwe-bend nokusebenza kahle kwemishini, i-PET filament isiphenduke indawo efanelekayo ye-bristle yemvelo ne-horsehair ezinhlotsheni ezahlukahlukene ezisukela kumishanelo emihle kuya emabhulashini okudweba. Ngaphezu kwalokho, intambo ye-PET igcina ukusebenza okuhle ngokomzimba ebangeni lokushisa okubanzi.
Okuhlangenwe nakho I-XINJIA isebenze emkhakheni wezintambo zepulasitiki iminyaka engaphezu kweyishumi, iyaqonda ukuthi ungangena kanjani kuzidingo zangempela nezicindezela kakhulu zamakhasimende, ukuletha izixazululo ezisebenzayo neziphumelelayo.
Indlela ehleliwe futhi eguqukayoIndlela yethu efakazelwe isisiza ukuthi sihlangabezane nemfuneko yakho ngesikhathi nangentengo ebhekiswe kuwe. Sivumelanisa nezidingo zakho futhi sihlanganyele nganoma yisiphi isikhathi embonini yebhulashi.
Uzakwethu OthenjwayoSisiza ukuxubha abakhiqizi ngezinjongo zebhizinisi lakho ngokunikeza imicu emisha ethuthukile. Njengomenzi wobucwebe beplastiki, sikholelwa ukuthi okuwukuphela kwendlela yokwenza umsebenzi wethu ukuhlinzeka ngenani lebhizinisi langempela futhi elinganisekayo.
KuphumeleleIningi lebhizinisi lethu lenziwa ngomlomo sibonga kumakhasimende ethu amaningi abalulekile. Sichaza ibhizinisi eliphumelelayo njengelinye elingasiza amaklayenti aqinise ukuncintisana emikhiqizweni yawo. Ithrekhi yethu yempumelelo ingenxa yama-oda aqediwe. I-fiber ngayinye ikhiqizwa ngaphansi kwabasebenzi abanolwazi kanye nokulawulwa okuqinile kwe-QC.
Kuzothunyelwa impendulo esheshayo maqondana nophenyo lwakho kungakapheli amahora ayi-12, abasebenzi abaqeqeshwe kahle nabanolwazi bakulungele ukunikezela ngosizo.
Isikhathi sokusebenza: 8:00 am - 5:00 pm, ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo (UTC + 8).
Ubudlelwano bakho bebhizinisi nathi buzoba yimfihlo kunoma yimuphi umuntu wesithathu.
Insizakalo enhle emva kokuthengisa.
Nomkhiqizi Professional Ukuba emkhakheni wezintambo zepulasitiki iminyaka engaphezu kweyishumi, ngemigqa engu-12 yokukhiqiza iqinisekisa ukuthi singakwazi ukufeza izidingo zamakhasimende zamathani angama-300 inyanga ngayinye.
Ikhwalithi ethembekile Sinikezela ngemicu yabakhiqizi abaningi abaziwayo beshayela nemishanelo ekhaya nakwamanye amazwe, abathi ikhwalithi iqinisekisiwe
Intengo yokuncintisana Ukubaluleka kwethui-ce iyahambisana ngesisekelo sekhwalithi ephezulu, futhiIntengo ekhethwayo inikezwa uma inenqwaba.
Ukulethwa ngesikhathi esifanele Sizibeka ezicathulweni zamakhasimende futhi sizibophezele ekuhlinzekeni ukulethwa okufika ngesikhathi.
Kukhona amafemu amaningi ongakhetha kuwo. Kepha uma ufuna ukukhuluma okuncane nokwenza okuningi, uzophetha masinyane ukuthi singukukhetha kwakho okuhle.